သင်္ကြန်လည်လို့ ဆိုပြီး ဖခင်က ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ (၁၅) နှစ် သမီးလေး သေဆုံး – Maharmedianews
သင်္ကြန်လည်လို့ ဆိုပြီး ဖခင်က ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ (၁၅) နှစ် သမီးလေး သေဆုံး
သင်္ကြန်မှာ ပျော်ချင်လို့ လည်တာ အစ်ကို အစ်မတွေ အတူထည့်လိုက်ပြီး လည်ပါစေလားဗျာ. . ခုတော့ ကလေးလည်း အသက်ဆုံးရှုံးရ၊ ဖခင်လည်းထောင်ကျ၊ မိခင်က ဘယ်လိုရင်ဘတ်နဲ့ ခံစားနိုင်တော့မှာလဲ?
ယမန်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့က အုတ်တွင်းမြို့ နယ် သရက်ချဉ်ကျေးရွာမှ မအေးအေးခိုင် အသက်(၁၅ ) နှစ်အား ဖခင်ဖြစ်သူမှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကြောင့် ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ နောက်စေ့အား ရိုက်မိသဖြင့် သတိလစ်မေ့မျော သွားခဲ့၍ အုတ်တွင်းဆေးရုံ မှ တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ ယာဉ်ဖြင့် အရေးပေါ် ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း သမီးဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။
အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားခဲ့ပြီးသော်လည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားသော မအိအိခိုင် အသက်(၁၅ ) နှစ်၏ နာရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဖခင်မှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလောင်းအား အုတ်တွင်းဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ အသင်းမှ အခမဲ့ ထပ်မံပို့ဆောင်ကူညီပေးထားကြောင်း သိရပါသည်။ .
သတင်းဓါတ်ပုံ – အရှင်တေဇ(နာယကဆရာတော်)
← ဆင်းရဲလှတဲ့ သုံညဘ၀နေ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူ ဂျက်မား၏ အတုယူဖွယ် ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း
လင်ငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မိန်းမကို လင်ကြီးက စောင့်ဖမ်းကာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်တိုက်ပြီး တူနဲ့ထု →